Cameron Smith Worth Net - Taona, Asa, Fiainana tany am-boalohany & More! - Net Worth
Cameron Smith Worth Net - Taona, Asa, Fiainana tany am-boalohany & More!
Ny haren'i Cameron Smith sy ny karamany
Vaovao farany momba an'i Cameron Smith
Cameron Smith dia mpilalao golf matihanina avy any Aostralia izay milalao ny lalao tsy tapaka. Ekena indrindra izy noho ny fandreseny ny Sony Open sy ny Championship PGA Australia, roa amin'ireo fifaninanana malaza indrindra amin'ny golf.
Cameron Smith dia teraka tamin'ny Aogositra 1993 tao Brisbane, Queensland, Aostralia. Tamin'ny taona 2013 dia nanao ny tetezamita ho amin'ny sehatra matihanina izy. Smith dia nifaninana tamin'ny PGA Tour, ny PGA Tour of Australia, ary ny Asian Tour, ankoatry ny fitsangatsanganana golf matihanina hafa.
Nandritra ny asany am-pitiavana dia nahazo ny 2011 Australian Boys' Amateur, 2011 Australian Amateur Stroke Play Championship, ary ny 2011 Victorian Junior Masters Championship. Nahazo ny Tompondakan'ny Lalao Amateur Stroke an'ny Aostraliana izy tamin'ny 2012, ary ny Tompondakan'i Aostralia Amateur tamin'ny 2013.
Nahazo ny Zurich Classic of New Orleans i Smith tamin'ny Mey 2017 ary ny Sony Open of Hawaii tamin'ny Janoary 2020, izay samy natao tany New Orleans.
Tamin'ny taona 2017 sy 2018 dia nandresy tamin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i PGA Aostraliana izy. Nisaraka ady sahala tamin’ny laharana faharoa i Smith tamin’ny fifaninanana Masters tamin’ny taona 2020. Tamin’ny US Open 2015, dia nisaraka tamin’ny laharana fahadimy izy.
Tamin'ny 2012, nahazo ny Tompondakan'ny Lalao Afovoany Amateur Stroke izy, ary ny taona nanaraka, dia nahazo ny Tompondaka Amateur Aostraliana izy.
Nahazo ny Zurich Classic of New Orleans i Cameron Smith tamin'ny Mey 2017, ary izy koa dia hahazo ny Sony Open any Hawaii amin'ny Janoary 2020.
Na tamin'ny taona 2017 sy 2018 dia voahosotra ho tompondaka amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i PGA Aostraliana izy. Niara-nilalao tamin'ny laharana faharoa i Smith tamin'ny fifaninanana Masters tamin'ny taona 2020. Nandritra ny US Open 2015, dia nisaraka tamin'ny laharana fahadimy izy.
29 taona izy ankehitriny.
Cameron Smith tombanana fa mitentina 6 tapitrisa dolara ny sandany. Ny asany amin'ny lalao golf matihanina no manome azy ny ankamaroan'ny harenany ara-bola. Nahazo tompon-daka lehibe telo i Smith nandritra ny asany am-pitiavana ary nahazo ny tompondaka efatra lehibe hatramin'ny nivadika ho matihanina.
Izy no malaza indrindra amin'ny fandreseny ny Sony Open sy ny PGA Championship Aostraliana, ary koa ny famaranana faharoa tamin'ny Masters Tournament tany Augusta, Georgia.
Nahazo totalin'ny $19,517,642 izy tamin'ny asany matihanina. Nahazo loka 2,788,235 dolara eo ho eo i Cameron nandritra ny asany. Ny taona tsara indrindra nataony dia 2020-21 raha nahazo $5,851,867 dolara izy.
Ho fanampin'ny fiakaran'i Cameron Smith amin'ny laharana faha-10 eo amin'ny World Golf Ranking, ny morontsiraka Voalohany dia lasa trano faharoa ho azy hatramin'ny nifindrany tany Etazonia avy any Brisbane, Aostralia.
Na dia teo aza ny zava-misy fa ny oram-baratra nanery an'i Smith hanafoana ny ampahany lehibe amin'ny golf manodidina ny mitataovovonana ny alakamisy ary koa ny zoma rehetra sy ny ankamaroan'ny asabotsy maraina, dia tsy voatery nanova ny fandaharam-potoanany amin'ny faran'ny herinandro mahazatra izy.
Ny fahafahana nijanona tao an-tranoko noho ny fahataran'ny orana dia tena nahasoa, hoy i Smith. Tsy azoko antoka izay ho nataoko nandritra ny roa andro raha nijanona tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny aho, hoy ny mpanoratra.
Nanomboka nametraka ny tenany teo amin'ny lalao i Smith taorian'ny tsy nahitana ny fahatapahana tamin'ny fitsidihana roa voalohany nataony tamin'ny The Players Championship tamin'ny volana Mey tamin'ity taona ity.
Tamin'ny taona 2019, nisaraka tamin'ny laharana faha-56 izy tamin'ny laharana faha-7, ary tamin'ny laharana faha-17 tamin'ny laharana faha-7 tamin'ny taona 2021, noho ny ampahany tamin'ny fihodinana fahatelo 65.
Nandritra ny amboaran'ny filoha 2019, natao tao amin'ny Royal Melbourne Golf Club any Aostralia tamin'ny volana Desambra, dia nisolo tena an'i Etazonia tamin'ny fifaninanana iraisam-pirenena izy.
Ny Masters 2020, izay nahafahan'i Smith nisaraka tamin'ny laharana faharoa taorian'i Dustin Johnson, dia nanamarika ny fisehoan'i Smith voalohany teo amin'ny tantaran'ny Masters ho hany mpilalao nitifitra ireo fihodinana efatra tamin'ny taona 60 nandritra ny fifaninanana.
Taorian’izay, dia nahazo ny 2022 Sentry Tournament of Champions, izay natao tamin’ny Janoary 2022 tao amin’ny Kapalua Resort any Maui, Hawaii.
Ny sandan'ny pretzel voaloko an'ny Shark Tank tamin'ny taona 2022
Kelly Clarkson Worth Net - Taona, Asa, Fiainana tany am-boalohany & More!
Lionel Richie Net Worth - Taona, Asa, Fiainana tany am-boalohany & More!
Starmon Metaverse: Namboarina tsara, sakana ambany, safidy maro isan-karazany | Tsy maintsy fantarina!
The Gifted Superhero Television Series
windows 8 emulator ho an'ny android
ny fomba fanaovana lalao roblox mavesatra haingana kokoa
tranokala fandefasana sarimihetsika malaza indrindra
mijery sarimihetsika vaovao an-tserasera maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana
mozika azoko henoina